अमेरिकामा भे’टियाे एउटा अनौ’ठो चरा- आधा भा’ले, आधा पो’थी ! – Khabarhouse
अमेरिकामा भे’टियाे एउटा अनौ’ठो चरा- आधा भा’ले, आधा पो’थी !
Khabar house | १४ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार ०६:२८ | Comments
एजेन्सी, १४ फागुन । अमेरिकाको पेन्सिल्भेनियामा एक पंक्षीविद्ले अ’नाैठाे चरा भेट्टाएका छन। आधा पो’थी र आधा भा’ले जस्तो देखिने उक्त चराको तस्बिर खिचेर उनी अहिले चर्चामा छन। उनकी एकजना साथीले नोर्दन कार्डिनल भनिने उक्त चरा देखा परेको बताएपछि पंक्षीविद्ले आफ्नो क्यामरामा चराको तस्बिर कै’द गरेका हुन् ।
बिबिसीका अनुसार अवकाश प्राप्त ती पंक्षीविज्ञ जेमी हिलले आफ्नाे जीवनकालमै एउटा र लाखौँ साक्षात्कार मध्येको एक दु’र्लभ चराकाे तस्वीर लिन सकेकाे बताए । सुरुमा हिलले उक्त चरा ‘लूसिस्टिक’ हो’ला भन्ठानेका रहेछन् तर मोबाइलमा तस्बिरहरू हेरेपछि उनले उक्त चरालाई ‘बाइल्याटरल गाइन्यान्ड्रोमर्फिजम’ भएको हुन सक्ने आशङ्का गरे ।
चराले आफ्नो प्वाँखमा हुनुपर्ने रङ्ग अर्थात् पि’ग्मेन्टेशन गु’माएको अवस्थालाई ‘लूसिसिजम्’ अर्थात् ‘पाण्डु’ भनिन्छ । हिललाई सुरुमा उक्त चरा आधा भा’ले र आधा पो’थी भएको जस्तो लागेको थिएन । किनभने द्वि’लिङ्गी वा उभय’लिङ्गी चराहरू निकै दु’र्लभ हुन्छन् । भाले कार्डिनलहरू च’म्किलो रातो र’ङ्गका हुन्छन् भने पोथीहरू फिक्का खैरो र’ङ्गका हुन्छन् । यी दुवै रङ्गको मिश्रणले चरा द्वि’लिङ्गी भएको स’ङ्केत गर्न सक्छ ।